Inona ny sain'ny saka? | Mariho ny saka
Inona ny sain'ny saka?
Ny vatan'ny saka dia misy taolana maherin'ny 230 sy hozatra maherin'ny 500 izay mamela azy hanao zavatra maro, toy ny mitsambikina avo dimy heny noho ny haavony, mihaino ny feon'ny totozy fito metatra miala, na miandry. ho anao ao ambadiky ny varavarana raha vao nivoaka ny fiara ianao mba hanomezanao azy ny kapoaka novidinao azy.
Ny sainy dimy dia miasa amin'ny hery feno hatramin'ny fahazazany.. Andeha hojerentsika ny mampiavaka azy.
Ho an'ny olombelona, ​​ny fahitana no zava-dehibe indrindra, ho an'ny saka… tsy dia be loatra. Ny lokon'ny loko hitany dia mahantra kokoa noho ny hita. Raha ny marina, mba hanomezana hevitra anao, dia toa olona very solomaso izy mandritra ny andro, izany hoe manjavozavo. Inona koa, zara raha manavaka loko, afa-tsy maitso, mavo sy manga.
Mifanohitra amin'ny, ny fahitan'izy ireo amin'ny alina dia avo 8 heny noho ny antsika. Izany dia satria ny mason'izy ireo dia manana ilay antsoina hoe Tapetum lucidum, karazana 'kristaly' izay mampita ny hazavana, ka mahatonga ny biby ho afaka manavaka ny antsipiriany izay tsy hain'ny olombelona afa-tsy ny mampamirapiratra ny masony. dia loharanon-jiro, na ny volana, ny tselatra ny fakan-tsary, ny jiro, sns.).
Sangan'asan'ny zavaboary ny fandrenesan'ny saka. Mivoatra be izy io. Mipetraka eo ambonin’ny lohany ny sofiny roa, ary azony atao ny manodina azy kely araka izay tiany, isaky ny mahita feo mety hahaliana azy, toy ny an’ny vorona na biby mpikiky.
Ny sensitivity azy amin'ny feo dia hoe inona no tokony ho an'ny olombelona raha ambany ny volume mozika (point iray na roa amin'ny radio ohatra), ho azy dia toa mafy kokoa ilay izy. Satria, tsy mila anao hanokatra varavarana izy mba hahafantaranao fa akaiky azy ianao: ny tongotrao manitsaka amin'ny tany, ny fikotrokotroky ny fanalahidinao, ny tabataba ataon'ny kitaponao raha entinao... dia manome anao ireo zavatra rehetra ireo.
Ny saka dia mpitaingina tady mahafinaritra. Afaka mandeha amin’ny lalana tena tery izy io, nefa tsy mihozongozona na dia iray aza. Fa nahoana? Ao anatin’ny sofina no misy ny tsiambaratelo, indrindra ny ao anatiny. Ery manana fantsona dimy mivelatra feno ranoka izay rakotra volo izay tena mora mihetsika.
Noho izany, rehefa hitan’izy ireo fa miodina amin’ny fomba hafahafa ilay biby, dia mandefa famantarana any amin’ny ati-doha izy ka hihodina amin’ny toerana mety ny vatana. Amin'izany fomba izany, rehefa mila azy ny saka, dia mihodina aloha ny lohany, avy eo ny lamosiny sy ny tongony aloha, ary farany ny ao aoriana.
Inona no hohanin'ny saka? Toa valim-panontaniana tsotra izany, saingy tato ho ato dia maro ny fisalasalana nipoitra momba izany. Raha ny marina, dia ampy ny manontany hoe karazana biby inona izy io, ary jereo izay hohanin’ny ankohonany. Raha lazaina amin'ny teny hafa: amin'ny maha-feline azy, ary raha jerena fa ny cougar, pantera, liona, sns., dia saka koa ary mihinana hena, dia lojika ny fiheverana fa. mpihinana sakafo koa ny saka.
Amin'ny filana, amin'ny instinct. Afaka mihinana voam-bary na ahitra izy io, fa raha efa nohanin’ny hazany ihany ireo sakafo ireo. Fa raha tsy mihinana hena ianao dia voaheloka ho faty, satria mila proteinina avy amin'ny biby mba hiasa ny vatanao, ary otrikaina antsoina hoe taurine ho an'ny maso mahasalama.
Ny saka dia manana fofona fofona, saro-pady kokoa noho ny antsika. Raha ny tena izy, dia avo 14 heny noho izay ananantsika rehetra. Izany dia satria manana sela 20 tapitrisa ao amin'ny orona izy io, raha 5 tapitrisa fotsiny ny olona. Fa ankoatra izany, ny taova oronany dia lehibe noho ny antsika.
Toy ny hoe tsy ampy izany, ao amin'ny tapany ambony amin'ny lanilany dia misy taova antsoina hoe vomeronasal na ny Taova Jacobson, izay ampiasaina mba 'hankafy' ny fofona. Izany no antony hanokafana ny vavany amin'ny fomba hafahafa rehefa mahita fofona tiany ho fantatra, ohatra, hoe iza no tompony ary ahoana izany.
Ho an'ny biby dia ilaina ny fikasihana mba hahafahany miaina ara-dalàna. Hatramin’ny nahaterahany, ireo receptors tactile izay ananan'ny hoditrao dia manatanteraka asa tena ilaina: Alefaso ny famantarana mifanaraka amin'izany mba ahafahan'ny saka mihetsika, raha ilaina, ary noho izany dia mijanona ho voaro, na amin'ny hatsiaka na ny hafanana, na amin'ny orana raha tsy tiany.
Ary ahoana no ahazoanao azy? Noho ny pads sy ny volombavany, indrindra indrindra. Ireo no ampahany amin'ny vatanao izay ampiasainao indrindra rehefa mahafantatra (na mahafantatra) ny tontolo iainana misy anao. Etsy andaniny, saro-pady amin'ny vibration ny paw pads, hany ka manampy anao hanao fihetsika tsara izy ireo rehefa mandeha na mihazakazaka.
Amin'ny tranga manokana amin'ny volombava, ireo dia saro-pady amin'ny rivotry ny rivotra, noho izany dia ilaina izy ireo mba hamantarana ny mety ho rembiny; Toy izany koa, mahaliana ny mahafantatra fa mahasoa azy ny mahafantatra na afaka mandalo amin'ny lalana tery izy na tsia, satria ny halavany manomboka amin'ny tendron'ny volombava amin'ny ilany iray ka hatrany amin'ny tendron'ny mifanohitra amin'izany dia mifanitsy amin'ny sakany ny vatan`ny saka.
Araka ny hitanao, ny saka dia biby mahafinaritra, na anatiny na ivelany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Inona ny sain'ny saka?
Ahoana no hanampiana ny saka masiaka?
Inona no atao hoe saka feral?